Nkọwa:Okwute uhie akpụkpọ ụkwụ,OEM Steering Wheel Cover,Okwute uhie ugbua ala
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > Ntube ohuru ihe mkpuchi igwe uhie uhie
Ihe Nlereanya.: BE-s01
Shenzhen Mara mma Earth Technology Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ nke mara mma na onyinye onyinye ma nwee ahụmahụ afọ 10 na-elekwasị anya n'ịzụ mkpuchi ụgbọ ala . Ugbu a, anyị nwere ọganihu, nke ọma na nlezianya na-arụ ọrụ nke ọma, ụlọ ọrụ ndị dị mma na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke mbụ, nke na-enyere anyị aka ịmepụta mkpuchi ụgbọ ala dị elu . Anyị ji n'aka na ị ga-enwe afọ ojuju na wiilị ụgbọ ala ịkwọ ụgbọala dị ka ụdị ndị a, ụdị ụkwụ ụgbọ ala silicone na logo.
Ihe mkpuchi ọ bụla nke Silicone nwere atụmatụ ndị a:
Ihe mkpuchi uhie uhie Silicone na -adaba na igodo ụgbọ ala gị . na mkpuchi pvc ụgbọ elu kwesịrị ekwesị maka igodo ụgbọ ala na-esonụ, nwee olileanya na ị ga-ahọrọ ụdị ndị kwesịrị ekwesị. Anyị nwere uru ọnụahịa nke mkpuchi uhie uhie ụkwụ ma ọ bụrụ na i nwere nnukwu.
mkpuchi uhie uhie uhie ígwè bụ ihe ọjọọ ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-eji ihe mkpuchi okpukpu abụọ nke Silicone n'aka gị, ọ na-adị nro, dị ụtọ na ìhè. Ị ga-ahụ maka mkpuchi pvc mgbe ị nwere ya.
Anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla dị iche iche nke mkpuchi ikpuchi Silicone dịka ihe ị chọrọ banyere anyị Ihe mkpuchi windo Silicone .
Ihe mkpuchi windo Silik nwere àgwà nke adịghị mma, mma nlegharị anya na ihu igwe, nguzogide okpomọkụ, ihe siri ike, mmiri na-adịghị ahụkebe, ihe nkwụ
A na -emepụta mkpuchi windo Silicone site na-eme ihe atụ maka ịkwado ụrọ, usoro niile anyị na-arụ na-arụ ọrụ n'onwe anyị.
Okwute uhie akpụkpọ ụkwụ OEM Steering Wheel Cover Okwute uhie ugbua ala Okwute uhie ọhụụ ọhụrụ Mkpuchi akpụkpọ anụ Mazda 3 Akpụkpọ ụkwụ isi Ejiji BMW X5 Akpụkpọ ụkwụ Kachacha akpụkpọ ụkwụ dị mma